बहस : महोदय, अरु सबै ठीक, लोकमान मात्रै बेठीक ! विमल गौतम | Canadian Reporters
बहस : महोदय, अरु सबै ठीक, लोकमान मात्रै बेठीक ! विमल गौतम
Posted on April 24, 2016 by क्यानेडियन रिपोटर्स
अगाडि वढ्न खोज्ने म जस्ता तमाम युवालाई केटाकेटी र अपरिपक्क भनेर हेप्ने मात्र होइन, चरित्र हत्या गर्ने, विभिन्न निच आरोप लगाउने र यो देशबाटै पलायन गराउन षड्यन्त्र गर्ने रलोकतन्त्रको ठेक्का लिने महोदयहरुले जवाफ दिनुहोस्– रुक्माङ्घत कटवाललाई नेपाली सेनाको प्रमुख वनाउनु हुँदैन भनेर कतिवटा नागरिक आन्दोलन भए ? कहाँ कहाँ घेराउ भए ? कहाँ कहाँ नागरिकपत्र दर्ता गराइए ? त्यो कदमको विरोधमा कुन पत्रकारले कैले के लेख्यो ? वा लेख्ने आँट गर्यो ? कमल थापा जसले आन्दोलनकारीमाथि सिधै गोली वर्साउन आदेश दिए, उनैलाई निर्वाचन लड्ने नैतिक अधिकार छैन भनेर कतिवटा नागरिक आन्दोलन भए ? कहाँ कहाँ घेराउ भए ? गोली चलाउन आदेश दिने वढी जिम्मेवार हुन्छ की सिंहदरवामार वसेर निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने एउटा कर्मचारी बढी दोषी हुन्छ महोदय, जनआन्दोलनमा दमनमा ? त्यति मात्र होइन, कटवाल र थापाको चुरीफुरी शुरु हुनु अगावै रायमाझी आयोगले दोषी ठहराएका थुप्रै सचिव, सहसचिव, सिडियोले वढुवा पाइसकेका थिए या सवैलाई पुरस्कृत गरिसकिएको थियो । राजाको कालमा समाचार संकलन गर्न जाँदा बढी क्रान्तीकारी नहुनुस् है भनेर चेतावनी दिनेहरु नै जनआन्दोलन पछि सिंहदरवारमा वसेर ठूला स्वरमा कुरा गर्ने भैसकेका थिए । म जस्ता शाहीकालीन मन्त्रीका भ्रष्टाचार र विकृतीको भण्डाफोर गर्ने संवाददातालाई पनि लोकतन्त्रको परिभाषा सिकाउने भैसकेका थिए ।
आदरणीय पाठकहरु, नढाँटी भन्छु, यी तर्ककै आधारमा मैले उनको नियुक्तिको विरोध गर्ने औचित्य ठानिनँ । कारवाही हुने हो भने सवैमाथि समान व्यवहार हुनुपर्यो । होइन भने कसैको विरोध गर्नु र कसैको समर्थन गर्नु नै प्रतिशोध होइन र ? यस्तै सोंच्दै रेग्मी नेतृत्वको सरकारले उनको नियुक्तिको सम्बन्धमा गरेको निर्णयको वचाउ गर्ने निचोडमा पुगेको हुँ । म आज जान्न चाहन्छु, लोकतन्त्रमा रुक्माङ्घगद कटवालका वारेमा पुस्तक लेखेर चर्चा गरिन्छ । कटवालाई यसरी प्रस्तुत गरिन्छ कि मानौं उनी लोकतन्त्रका महान नायक हुन् । उनका पुस्तकका तमाम समीक्षा छपाइन्छ । जन –आन्दोलनमा होमिएका हजारौं निर्दोष नागरिक (जसमा म स्वयं पनि पर्छु) माथि गोली वर्साउन आदेश दिने उनीजस्ताको अन्र्तवार्ता, समीक्षा छापेर हामी आफूलाई महान लोकतन्त्रवादी दावी गर्दै हिंड्छौं ।जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आदेश नमान्ने उनीजस्ता व्यक्तिलाई हिरोलाई जसरी प्रस्तुत गर्छौं । कमल थापा जस्ता गोली वर्साउन आदेश दिने व्यक्तिलाई यो मुलुकमा उपप्रधानमन्त्री वनाइन्छ । पराराष्ट्र जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मा दिइन्छ । कलंकीमा जनआन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउँदै गरेको तस्विर सार्वजनिक भएका व्यक्ति दुर्जकुमार राई आज सशस्त्र प्रहरी वलका प्रमुख छन् । मैले नवुझेको के हो भने, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सवैका हकमा लागु हुन्थ्यो भने कमल थापा, कटवाल वा राइजस्ता व्यक्तिको वढुवा नहुनुपथ्र्यो । जनआन्दोलन दवाएकोमा अरु ठीक लोकमान मात्र वेठीक भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न–के त्यसरी व्याख्या गर्नु चाहिं प्रतिशोध होइन ? अरुको बढुवा हुँदा केही नवोल्ने लोकमानको सिफारिस हुँदा मात्र मरिमेटेर सडक आन्दोलन गर्नु प्रतिशोध होइन ?
दुर्जकुमार राइको बढुवामा चुइंक्क वोल्दैनौं, लोकमानलाई एकोहोरो प्रहार गर्छौं । यो चाहिं प्रतिशोध होइन ? लोकतन्त्रमा लोकमानको मात्र विरोध हुने, थापा, कटवाल वा राइहरुको समर्थन गर्ने भन्ने हुन्छ भने सायद मैले लोकतन्त्रकै परिभाषा नवुझेकै हो । होइन भने, थापा, कटवाल र राइहरुको नियुक्ती प्रक्रियामा कति वटा नागरिक आन्दोलन, घेराउ र सडक आन्दोलन भए ? अनि लोकमानको हकमा चाहिं उनी विरुद्ध मिसन नै बनाएरै आन्दोलन किन ? अख्तियार वढी संवेदनशील अंग भएर उनको वढी विरोध भएको हो भन्ने तर्क गर्नेहरुलाई सोध्न चाहन्छु,– अख्तियार ठूलो कि मन्त्रिपरिषद्? मन्त्रिपरिषद्मा कमल थापा छन् । कमल थापले मन्त्रिपरिषद्वाट गराउने निर्णयमाथि त अख्तियारले पनि छानविन गर्न पाउँदैन, महोदय । त्यसैले अख्तियार भन्दा शक्तीशाली त मन्त्रिपरिषद् नै हो । मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त हुने जनआन्दोलन दमनकारीको मौन समर्थन अनि लोकमानमाथि एकोहोरो प्रहार ? यहिं हो लोकतन्त्रले सिकाएको समान व्यवहार ? यहिं हो लोकतन्त्रको परिभाषा ?
चीन र नेपालको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा: चिनियाँमन्त्री
Stupid Shit Narendra Modi, US TV channel